Fumanisa iiTattoos ezinomdla ngeebhola zekristale Ukuzoba
Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Izinto kunye neeTattoos zezinto
IiTattoos eziphefumlelwe ziibhola ezimnyama zekristale
Susana Garcia | | Iitatoo, Izinto kunye neeTattoos zezinto
Las Iikristale iibhola ziyinto emnandi ezidityaniswe kwihlabathi lemfihlakalo. Kuyabonakala ukuba ezi bhola zisetyenziswa ziimboni ukuze zikwazi ukubona okufihliweyo emehlweni. Yiyo loo nto banayo loo aura yemfihlakalo. Iibhola zeCrystal ziyindlela yokwazi ikamva, yiyo loo nto benelo thintelo.
Kuqhelekile ukubona yikristale ibhola kunye neeTattoos kwimpembelelo yesikolo esidala. Kodwa zininzi nezinye izimvo kunye nezitayile xa kufikwa ekubambeni le nto. Ukuba ungomnye wabo babhejayo kwiibhola zekristale ngentsingiselo yazo enxulunyaniswe nekamva kunye nekamva, qaphela zonke ezi tattoos.
1 Ibhola yekristale yesikolo esidala
2 Umvambo kunye nomvumisi
3 Iitattoos ngeethoni zombala wamanzi
4 IiTattoo ze-inki emnyama
5 Iitattoos ngeebhola kunye nomhlaba
Ibhola yekristale yesikolo esidala
El indlela yakudala yesikolo ixhaphake kakhulu kolu hlobo lwezihloko ze-esoteric, ke siza kufumana inkuthazo eninzi malunga noku. Le tattoo ine-aesthetic yesikolo esidala eneethoni eziqinileyo, izithunzi zokwenza ivolumu kwaye yomelele kwaye ichaze imigca emnyama.
Umvambo kunye nomvumisi
Las abaxeli-thamsanqa ngabalinganiswa abasebenzisa iibhola zekristale ukubona ikamva. Kungenxa yoko ngamanye amaxesha sibona izinto ezimbini ezinxulunyaniswe netattoo enye. Kule meko sijamelene nesitayile esidala sombhalo wesikolo kunye neetoni ezininzi ezomeleleyo, apho ibhola ibonakala ngokukhanya kwayo kunye neetoni eziqaqambileyo.
Iitattoos ngeethoni zombala wamanzi
Ezi tattoo zikhuthazwe lilizwe elidala lesikolo kodwa ngokwembono yanamhlanje. Kule meko sijamelene nezinye iitattoo zesitayile sangoku Sebenzisa i-watercolor shades.
IiTattoo ze-inki emnyama
Ezi tatto zisebenzisa kuphela iithowuni ezimnyama ukunika ubunzulu. A ithoni engapheliyo kwaye onokwenza ngayo ii-tattoos ezintle ngokulinganayo.
Iitattoos ngeebhola kunye nomhlaba
Ezi Iikristale iibhola zine tattoos ngaphakathi. Iibhola zinokusikhuthaza ukuba sibeke naluphi na uhlobo lwembonakalo yomhlaba okanye into yangaphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » IiTattoos eziphefumlelwe ziibhola ezimnyama zekristale
Ezinye iitatoo ezinxulumene noko
Iimpawu zomoya, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
IiTattoos eziphefumlelwe ziingelosi
Fumana izimvo zetattoo zamva nje kwi-imeyile yakho.